दाङको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा अक्सिजनको अभाब ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारदाङको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा अक्सिजनको अभाब !
दाङको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा अक्सिजनको अभाब !
दाङको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा अक्सिजनको अभाब छ । अहिले अस्पतालमा १२० वटा अक्सिजनका सिलिन्डर छन् । ति सिलिन्डरले अस्पतालमा रहेका संक्रमितलाई पु¥याउन निकै धौ–धौ पर्ने गरेको अस्पतालका व्यबस्थापक दोर्ण ओलीले बताए ।
“हामीसंग सिलिन्डरको संख्या निकै न्यून छ”, उनले भने “ अहिले रहेका १२० वटा सिलिन्डरले पु¥याउन निकै धौ–धौ पर्ने गरेको छ ।”अस्पतालमा अहिले ५२ वटा वेड छन् । बेड थप्ने तयारी रहेको छ । अस्पालको माथिल्लो तला यस अघि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले दिन मानेको थिएन ।
तर, अहिले प्रदान गर्ने सहमति भएपछि बेड थप्ने कार्य भइरहेको व्यबस्थापक ओलीले बताए ।उनका अनुसार ६५ बेड थपिने छन् । ६५ बेड थपिएपछि करिब तीन सय अक्सिजन सिलिण्डर आबश्यक पर्छ ।त्यसकालागि स्थानीय तहहरुसंग सिलिण्डर उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको उनकोे भनाई छ ।
“बेड मात्रै थपेर हुँदैन्, बेड संगै अक्सिजन सिलिन्डर पनि थप्नु पर्छ”, उनले भने “त्यसकालागि हामीले स्थानीय तहहरुसंग बेडसंख्या थप गरिदिन माग गरेका छौं ।”अहिले बेलझुण्डी अस्पतालमा जनशक्ति पनि अभाब छ । जनशक्ति अभाब हुँदा दाङका ६ वटा स्थानीय तहसंग जनशक्ती पनि माग गरिएको व्यबस्थापक ओलीले बताए ।
उनका अनुसार घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित बबई, शान्तिनगर, बंगलाचुली र दंगीशरण गाउँपालिकाबाट कर्मचारी माग गरिएको छ । गाउँपालिकाबाट ९÷९ जना र उपमहानगरपालिकाबाट १८/१८ जना जनशक्ति माग गरिएको छ । नर्स, कार्यालयसहयोगीसहितका कर्मचारी माग गरिएको हो ।